‘सुजनाले घरमै घटाइन् ६ महिनामा ३६ केजी’
मान्छेहरूको ‘कति मोटाएको ?’ भन्ने प्रश्नबाट वाक्कदिक्क भएँ। झण्डै डिप्रेस्ड भइनँ। घरबाहिर निस्कनै नहुने। जो भेट्यो यहीँ मात्र प्रश्न गथ्र्यो– ‘कति मोटाएको ?’
हार मान्न नदिने शबाना
अनुहारदेखि शरीर पूरै बदलिएको थियो। छ महिनामा ३६ केजी वजन घटाएकी थिएँ। इन्स्टाग्राममा पहिला र अहिले भनेर फोटो हालेँ। सबै जना दंग परे। के गरी भयो ? कसरी भयो ? भनेर सोध्न थालेँ।
दुब्लाएपछि स्वास्थ्यमा पनि सुधार
मोटो हुँदा मलाई स्वास्थ्यसम्बन्धी धेरै समस्या थिए। टाउको दुख्नु मेरो लागि सामान्य थियो। सिरानीभरि औषधि हुन्थे। टाउको दुख्नेबित्तिकै औषधि खाइहाल्थेँ। महिनावारी पाँच–छ महिनामा एकचोटि हुन्थ्यो।
महिनावारी हुँदा धेरै दिनसम्म लगातार ब्लिडिङ हुन्थ्यो। डाक्टरकोमा जँचाउन जाँदा रिपोर्ट सबै ठीक हुन्थे। डाक्टर पनि ‘मोटी भएर हो कि’ भन्दै फर्काउँथे। एक छिन हिँड्दा पनि स्वाँस्वाँ हुन्थ्यो। टुक्रुक्क बसेर केही काम गर्न सक्दैनथेँ। व्यायाम गर्न थालेपछि यी सबै समस्या हटेर गएँ।
पहिला अरूलाई देखाउन दुब्लाएकी थिएँ। अहिले आफूलाई स्वस्थ राख्न अभ्यास गर्छु। राम्री हुनभन्दा फिट हुन खानपानमा ध्यान दिइरहेकी छु। पहिला अस्वस्थ जीवनशैली बाँचेकी रहेछु। अहिले स्वस्थ जीवनशैली बाँचिरहेकी छु। फिटनेस मोटो मान्छेका लागि मात्र होइन, दुब्लोको लागि पनि उत्तिकै जरुरी छ।